शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने! - Unity Khabar
शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने!
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७८, आईतवार १२:१६
काठमाडौँ: नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले दलका नेता शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय गरेको एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
यसअघि आइतबार बिहान पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बसेको संसदीय दलको बैठकले संविधानको १६८ ९१० बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा बहुमतको सरकार बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
उनले जनता समाजवादी पार्टीबाट यसअघि मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेय, कल्पना पाण्डे लम्साल, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी पनि एमालेको एकल सरकारमा सहभागी हुने बताए ।
एमालले बहुमत सदस्यसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसामु पेस गरेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्था भए अनुसार संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीले चार र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई जना सांसदलाई कारवाही गरेपछि हाल प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादीका १७ ९सभामुखबाहेक०, कांग्रेसका १९, जसपाका दुई र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।